Ukuqhuma kuzobhidliza amakhaya eScotland nakwamanye amabika nguJucelino Luz – JucelinoLuz
Ukuqhuma kuzobhidliza amakhaya eScotland nakwamanye amabika nguJucelino Luz
Águas de Lindóia, Agasti 17, 2021
Okuqukethwe kukhishwe ezincwadini zamabizo ezithunyelwa ezindaweni ezahlukahlukene neziphathimandla emhlabeni jikelele.
Ukuqhuma ngo-Okthoba 18, 2021, kuzocekela phansi amakhaya amane endaweni ehlala abantu e-Ayr, eScotland.
Kunezinhlelo zokubulala uMongameli waseBolivia, uLuis Arce, osengozini yempilo yakhe kuze kube nguDisemba 31, 2021.
Ngenxa yokuguquka kwesimo sezulu, amadolobha asenyakatho nasenyakatho-mpumalanga yezwe azobe ehlushwa ukuncibilika kweqhwa unomphela. Izindlu zizowa, izindawo zokugcina izimpahla namapayipi azoba sengozini futhi imigwaqo izodinga ukulungiswa kakhulu. Ukuguguleka kwenhlabathi kuzokhula kakhulu, kungagubuzela amadolobhana futhi kubulale abantu abaningi.Futhi kungaqhubeka nokubhujiswa kwezinye izindawo zaseRussia kuze kube nguDisemba 31, 2021.
Amacala angaba yishumi azotholakala eXian, idolobha elisenyakatho-ntshonalanga elisesifundazweni saseShaanxi, namabili e-Inner Mongolia, isifunda esisenyakatho neChina, nezinkinga zeCovid19.
I-Erenhot, idolobha lase-Inner Mongolia eligudla iMongolia, elizobikwa kusukela ngo-Okthoba 13, 2021
Inkinga yaseChina ingadala izinkinga ezinkulu ngoMashi 12, 2022, bese-ke, ingena ekuweni komnotho phakathi kuka-Okthoba noNovemba 2022 – uma kungenziwa lutho.
Enye ye-CPI exakile (iKhomishani Yokuphenywa KwePhalamende) eBrazil, ifuna ukuzama ukwenza ubugebengu abantu abathembekile nabangenacala, futhi ivikela labo abasebenzisa budedengu izinsizakusebenza futhi benza ukukhwabanisa kwemali okwenziwa ngamanye amaMeya nababusi. Inhloso ye-CPI ukusola uMongameli waseBrazil ngokuqothulwa kohlanga, noma kunjalo, bakhohlwa ukufaka amagama abo (ingxenye yamaSeneta, Ingxenye yamaSekela nababusi), abethule isikhathi esingaphezu konyaka, bephambukisa izinsizakusebenza ezikhwameni Esidlangalaleni, imali yabantu baseBrazil. Kungamampunge ukufuna ukusola, umzimba ohlonishwa njenge-Federal Council of Medicine, ebihlale isekela izintshisekelo zokuziphatha, ukunikezwa kwemithi esebenzayo nenkululeko yokwenza ngokuyalelwa ngudokotela – okungalungile futhi okuyingozi, yilokhu iqembu lobugebengu elithatha lo mthetho, elidwengula uMthethosisekelo waseBrazil, ukuvikela ubugebengu obuhleliwe ezweni. izinkinga zaseBrazil. Eqinisweni, ingxenye yemithetho nezinqumo ezenziwe yilaba sopolitiki akuhambisani noMthethosisekelo – ngoba ababathandi abaseBrazil noma izwe – ngisho bona kuphela. Futhi kunezimpawu zokuthi basebenza ngokuvumelana namanye amalungu amanye amandla. (Judiciary and Legislative). Ukukhumbula nje ukuthi ubunzima bezomnotho, izinkinga ngegciwane le-Covid19, amaqiniso wokugoma azodalwa yilaba bantu (Izinqubomgomo), ngakho-ke, ivoti lakho liyimfihlo, kepha lingaguqulwa okhethweni oluzayo, hhayi ukuvotela laba bameleli noma inzalo yabo (noma ekhonjiswe yibo), abangenzi lutho oluhle ngeBrazil yethu enhle.
Isikebhe esizothutha abantu abali-11 emfuleni iParnaíba (PI) sizocwila ngo-Okthoba 17, 2021 Abagibeli abayisithupha bazokwazi ukusinda. Kepha abahlanu bazonyamalala, kufaka nomama ozozama ukusindisa indodakazi yakhe eneminyaka emihlanu. UJulianne Bezerra Magalhães ushade nomnikazi wesikebhe, uDárcio Saraiva Martins, lesi sikebhe sizokhuluphala ngokweqile, futhi isimo sezulu sizoba yizimo ezingaba sesimweni sokucwilisa isikebhe.
Labo abagonywe okungenani umthamo owodwa wemithi yokugoma etholakala e-Italy (Pfizer / BioNTech, Moderna, Oxford / AstraZeneca naseJanssen) sebebonke abantu abayizigidi ezingama-46.2, okumele cishe abantu abangama-85.71% abaneminyaka engaphezu kwengu-12 ubudala. Futhi izobhalisa e-Italy cishe abantu abangama-70 abashona ngoCovid-19 kusukela ngomhlaka 16 kuya kumhla ziyi-19 ku-Okthoba 2021, okukhombisa ngokusobala ukuthi umuthi wokugoma awusebenzi, nokuthi basemhlabeni bakhohlisa abantu, lapho bezithethelela khona bakha ama-Strains futhi Okuhlukile. Futhi bafuna ukukhohlisa abantu ngomthamo wesithathu, wesine, wesihlanu, nalokho okubizwa ngokuthi iPasport Sanitary – becabanga ukuthi bazovikela umphakathi. Okuvikela abantu “Imfundo Yezempilo nokutshalwa kwemali ocwaningweni – ngaphandle kokubandakanyeka kwezepolitiki” Sekukonke, izwe lizokwengeza ukufa kwabantu abangu-131 655 ababulawa yilesi sifo ngo-Okthoba 19, 2021.
Ngo-Okthoba 15, 2021, abagibeli abane bazolimala begibela isitimela i-Amtrak lapho izoshayisana neloli likanogolantethe elizobambeka lapho kuwela khona ujantshi eduze kwaseThackerville, e-Oklahoma (USA)
UMongameli wase-Ecuadorian uGuillermo Lasso kuzofanele amemezele isimo esibucayi ezweni lase-Andes ngo-Okthoba 18, 2021, lesi sinyathelo sizosabela ekukhuleni kwamanani okubulawa kwabantu ezweni lonke nobunye ubugebengu obuhlobene nokubanjwa kwabantu okuzobanjwa ezweni . UMongameli naye usengozini yokuphila kuze kube nguJanuwari 5, 2022 ..
Izikhukhula zizogadla entshonalanga yeNdiya futhi zingabulala okungenani abantu abayi-170 ezifundazweni ezisentshonalanga yeGujarat, Maharashtra, Karnataka naseKerala. Futhi ingaqhubeka nezinkinga ezinkulu zama-gales, iziphepho nezikhukhula ezinzima kuze kube nguDisemba 24, 2021.
Ukuzamazama komhlaba okunamandla kungahlasela iNdiya ngo-Ephreli 12, 2022
UProf. UJucelino Luz – umcwaningi, umbhali, isazi sezemvelo kanye nomhlahlandlela wokomoya
Uqhushumbo luya kutshabalalisa amakhaya aseScotland kunye nolunye u-Jucelino Luz
O vulcão do Monte Aso, província de Kumamoto, no sudoeste do Japão e outros presságios